Barcelona Oo Tixgelineysa Iibinta Antoine Griezmann, Iyo Ousmane Dembele Si...
Barcelona Oo Tixgelineysa Iibinta Antoine Griezmann, Iyo Ousmane Dembele Si…
Related Topics:AntoineBarcelonaDembelegool24net wararka ciyaarahagoolfmGriezmanniibintaiyoOusmaneTixgelineysaWararka CiyaarahaWararka Maantawararka maanta ethiopiawararka maanta muqdishowararka maanta muqdisho 2021
Martin Odegaard ayaa ka tagay Real Madrid suuqii Janaayo si uu ugu biiro Arsenal heshiis lix bilood oo amaah ah, laakiin kubadsameeyaha reer Norway ayaa cadeeyay inuu joogi doono Estadio Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda.
Warar xan ah ayaa horay u sheegayay in Arsenal ay dooneyso inay Odegaard ku sii heyso waqooyiga London si joogto ah, laakiin Los Blancos ayaa ku wargelisay 22 jirkaan inuu ku jiro qorshaha Carlo Ancelotti.
“Xaaladda waxay tahay inaan ahay ciyaaryahan Real Madrid ah waana inaan dib ugu laabtaa halkaas toddobaad iyo badh,” ayuu Odegaard u sheegay telefishanka Norway ee TV 2.
“Real Madrid way cadahay: waxay iga doonayaan inaan dib u soo laabto. Marka, waa inaan u safraa halkaas marka isku diyaarinta xilli ciyaareedka uu bilowdo.
“Way cadahay in riyadaydu had iyo jeer tahay inaan ka ciyaaro halkaas [Real Madrid]. Waxaan kooxda joogay in ka badan lix sano haatan, taasna had iyo jeer waxay ahayd hadafkeyga.”
Odegaard ayaa sagaal kulan u saftay Real Madrid ololihii 2020/21 ka hor inta uusan u wareegin Arsenal, halkaasoo uu u ciyaaray 20 kulan oo dheeri ah.
Marxaladda group-ka ayaa soo afjarmay, iyadoo la sugayo labo maalmood si loogu gudbo kulamada kale ee xiga
Waa sidee shaxda ugu fiicneyd wareega saddexaad ee Euro 2020.
Lukas Hradecky (GK) –
Steven Zuber (LB)
Maxaa Ka Jiro In Lionel Messi Iyo Barcelona Ay Heshiis Wada Gaareen.
Wararka ka imaanayo gobolka Catalan gaar ahaan Kooxda Barcelona ayaa sheegayaan in qarka ay u saaran in ay ku dhawaaqdo heshiiska cusub ee ay ka saxiixanayso xiddiga Lionel Messi sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Spain.
Lionel Messi ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa kooxda Barcelona waxana ay kooxdu ku dadaalaysaa in ay heshiis cusub ka saxiixato kabtankeeda.
Wargayska MARCA ayaa sheegaya in ay kooxda Barcelona iyo Lionel Messi si Rasmi ah uga heshiiyeen cusboonaysiinta heshiiska xiddiga reer Argentina kaas oo haatan xulka qarankiisa kala qayb qaadanaya tartanka Copa America.
Wararka Maanta : Laba nin oo u kala dhashay Britain iyo Malaysia oo lagu maxkamadeynayo...
Isla wargayska ayaa sheegaya in ay kooxda Barcelona xiddiga Ka saxiixatay heshiis ilaa xagaaga 2023 ah oo uu ku sii joogi doono koxoda uu xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku soo qaatay.
Ku Dhawaaqista Heshiiska ee Barcelona ayaa la filayaa wakhtiga Soo socda ka hor inta uuna heshiiska xiddigu dhicin
Real Madrid Oo Kula Dagaalameysa Arsenal Saxiixa Ciyaaryahanka Real…
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku qasban tahay inay ka weecato xiisaha iyo saxiix xiddiga kooxda Real Sociedad ee Alexander Isak hadii aysan dhan ka aheyn madama Kooxda Real Madrid ay ku soo biirtay Loolanka.
Mustaqbalka Eddie Nketiah iyo Alexandre Lacazette ayaa huwan shaki la’aan, tababaraha Gunners Mikel Arteta ayaa loo maleynayaa inuu qorsheynayo inuu u dhaqaaqo Isak oo qeyb ka ah weerarka cusub.
21 jirkaan ayaa ku soo bilaabay dhamaan seddexdii kulan ee Sweden ee Euro 2020 ilaa iyo haatan, in kasta oo uu ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto, hadana wuxuu kasbaday shaqooyin badan oo sumcad leh qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah.
Baadigoobka Arsenal ee Isak ayaa laga yaabaa inay ku adkaato Real Madrid, si kastaba ha ahaatee, AS ayaa warinaysa in kooxda Carlo Ancelotti ay durbaba xiriir la sameysay wakiillada weeraryahankan si loo helo.
Warbixinta ayaa intaas ku dareysa in Sociedad aysan u ogolaan doonin Isak inuu baxo ilaa iyo inta ay heleyso € 70m (£ 59.8m), laakiin tiradaasi weli waxay kor ugu kici kartaa € 90m (£ 76.9m).
Isak qudhiisa ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo Sociedad waqtigaan, halkaasoo uu ku dhaliyay 17 gool 34 kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkii hore.
Juventus Oo Soo Saartay Liiska 7-ka Xiddig Ee Badalka U Noqon Doona…
Kooxda Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaarsatay 7 xiddig oo u sharaxan badalka xiddiga shanta jeer ku guulaystay abaalmarinta Ballon d’Or ee Cristiano Ronaldo .
Weeraryahanka reer Portugal ayaa kaliya 12 bilood uga hartay qandaraaskiisii ​​hore ee Turin, laakiin Juve oo xili ciyaareedkii ugu xumaa soo bandhigay sanadkan ayaa u aragta xidigan mid baxaya.
Ronaldo ayaa weli ku riyaaqay olole shaqsiyadeed isagoo 29 gool ka dhaliyay 33 kulan oo Serie A ah, laakiin joogitaankiisa kooxda ayaa shaku weyn ku jiraa xiligan.
Sida laga soo xigtay Il BiancoNero , kooxda reer Talyaani ayaa durbaba qorsheyneysa iibitan Ronaldo iyadoo soo bandhigtay toddobo ciyaartoy oo badali kara booskiisa 2021-22.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Gabriel Jesus , Edin Dzeko , Ousmane Dembele , Arkadiusz Milik , Mauro Icardi , Andrea Petagna iyo Dusan Vlahovic ay dhamaantood tixgalinayaan hadii Ronaldo uu ku dambeyn doono inuu baxo isbuucyada soo socda.
Ronaldo – ayaa dhawaan lala xiriiriyay u dhaqaaqista Barcelona – xidigan ayaa dhaliyay 101 gool oo ka yimid 133 kulan uu u saftay Juve tan iyo 2018.
Cristiano Ronaldo Oo Caawa Sameeyay Taariikh Kale Kulankii France
Cristiano Ronaldo ayaa markale taariikh sameeyay. Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay labo gool ciyaartii Portugal ay barbaraha 2-2 la gashay France si uu ula barbardhigo Ali Daei oo ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kubada cagta adduunka.
Weeraryahanka Juventus ayaa dhaliyay 109 gool oo caalami ah 178 kulan oo uu u saftay xulkiisa, taasoo ka dhigeysa inuu yahay ciyaaryahanka ugu goolasha badan Portugal. Sidoo kale, wuxuu dhaliyay 14 gool oo European Championship ah – waana in ka badan dadka kale – wuxuuna leeyahay rikoorka gooldhalinta Champions League isagoo dhaliyay 134 iyo Real Madrid uu oo u dhaliyay 451.
Sweden iyo Lithuania ayaa ahaa qaramada uu ka dhaliyay goolasha ugu badan, isagoo ka dhaliyay min 7 gool koox kasta.
Horyaalada Yurub iyo Koobka Adduunka marka la isku daro, Cristiano wuxuu leeyahay 20 gool. Mar labaad, taasi oo ka badan badan qof kasta oo kale.
Lionel Messi ayaa si uun uga dambeeya 73 gool oo Argentina ah.